नेपाल आज | दुई तिहाईको सरकारबाट गणतन्त्र खतरामा (भिडियोसहित)
दुई तिहाईको सरकारबाट गणतन्त्र खतरामा (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेकपाका कार्यकर्तामा मण्डलेकरण भएको छ । मण्डलेकरण भनेको सत्ताको उन्माद लाग्ने हो । आलोचना सुन्नै नसक्ने हो । नेकपाका नेताहरु त्यही स्कुलिङबाट आएकाले उनीहरुका कार्यकर्ताले पनि त्यही सिकेका छन् । फरक विचारको सम्मानको त कुरै छोडौं यिनीहरु आफनो प्रशंसाबाहेक अन्य कुरा सुन्नै सक्दैनन् । वास्तवमा अहिले गणतन्त्रमाथि कसैले तरवार झुण्ड्याएको छ भने त्यो नेकपा पार्टीले हो ।
‘राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सुविधामुखी सोचले पनि गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाएको छ । उनलाई प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर शितल निवास किन फराकिलो चाहियो ? खसी बोका बेच्ने किसानबाट कर उठाउने देशमा राष्ट्रपतिलाई अरबौंको हेलिकप्टर र करोडौंको कारगेड किन चाहिने ? सरकार त गैर जिम्मेवार भयो भयो, अब राष्ट्रपति पनि देश र जनताप्रति चिन्तित नहुने ?’ गुरुङको आक्रोश छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सरकारका गलत क्रियाकलापको डटेर सामना गर्न सकेका छैनौ । सडक र सदनबाट गरिएको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा छौं, यसले केही मद्दत अवश्य पु¥याउने छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतामा विषयमा निर्णय दिन सक्नु पथ्र्यो । सहमति नभए मतदानबाट भएपनि यो विषयको टुंगो लगाउँदा हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको कदर गर्नुपर्छ । जसरी नागरिकता विधेयकबारे सहमति गर्न शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो गलत काम हो । यसले शीर्ष नेताहरुमा निरंकुशताको भावना विकास गराउँछ ।
सरकार केही गम्भीर मुद्दामा अपारदर्शी देखिएको छ । खासगरी अमेरिकाको ‘इण्डोप्यासेफिक रणनीति र चीनको बिआरआई’ का सवालमा सरकारले सूचना लुकाएको छ ।
जीतजंग र भुपेन्द्रलाई कारवाही
तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महामन्त्री भुपेन्द्रजंग शाहीले पार्टीकै लाज गरे । दुवै गैर जिम्मेवार देखिए । आफनो कार्यकालमा फेसबुकमा लेख्नु बाहेक कुनैपनि रचनात्मक काम गर्न सकेनन् । अहिले कार्यकालको अन्तिममा आएर जग हँसाए ।
उम्मेद्वार हुन दवाव
आगामी मंसिरमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि कास्की २ बाट उम्मेद्वार हुन सो क्षेत्रबाट अनुरोध आइरहेको छ । कांग्रेसका मात्र होइन अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत दैनिक सन्देश पठाएर उम्मेद्वारका बनिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुने तयारी गर्दैछु । यसका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुसंग छलफल भैरहेको छ ।
कांग्रेसमा सधैं नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा हुन्छ, तर अब हस्तान्तरण होइन, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ । नेतृत्व पुस्तान्तरण नभएसम्म कांग्रेसलाई सुधार्न मुश्किल छ ।